Sheekooyinka - Telling the Real Story
Sheekada Mustafe: Riyadii dambsayka noqotay
“Waxa lay sheegay inYurub ay lacagtu iska daadsan tahay dhulka, in aad meel kasta ka heli karto. Qof kasta oo ku dhaafaa in uu dhawr kun oo dollar uu kuu dhiibi doono. In ay tahay meel aad si fudud lacag u heli karto mustaqbalna aad ka samaysan karto. Sidaas darteed baan magafayaasha u raacay.”
	Sheekadii Zakaria Osman: Kacdoon ka dhan ah tahriibiyayaasha
Zakaria Osman and his friends could not take the daily torture anymore and tried to break out of the trafficker’s prison. Watch his story!
Sheekeda Zakariye: Wuxu ku jiray gacmaha tahriibiyayaashe
Zakaria Hussein wuxu u malaynayay in safarka Yurub uu fududyahay laakiin waxay ku noqotay riyo xun noloshiisa
Aan laabasho lahayn
Deeqa oo 24-sano jir ah waxay Talyaaniga ku nooshahay muddo 7 bilood ah iyadoo wali sugaysa go’aanka magangalyada
Khadar waxa uu Somalia ka soo tagay 2008 isagoo doonayay in uu gaaro UK. Waalidkiis way ka soo horjeedeen tahriibka balse wuu ku adkaystay iyagoo ugu dambeyntii ogolaasho siiyay. Isagoo ay soo jiidatay sawirada asxaabtiisa ay internetka soo galiyeen oo muujinaysa nolol wanaagsan.
Sanadihii badnaa ee uu Fahad dhuumaalaysiga ku jiray
Isaga oo 13 sano jir ah ayay Al-shabaab isku dayeen in ay qasab askari uga dhigaan Fahad. Waxa uu u baxsaday Ethiopia isaga oo aan u sheegin qoyskiisa maadaama uu ka cabsi qabay in iyaga lagu qasbo in ay sheegaan halka uu ku suganyahay.
Sheekada Cabdisamad Cumar: Walaashay waxay ku dhimatay badda laakiin wali waxaan rabay inaan safro
"Markii aan maqlay dadka dhahaya inay dib u noqonayaan oo ay raadsadaan tahriibiye, taasi waa markaan xasuustay inaan walaashay wadadaas ku waayey. Waxaan mooday, haddii aad ku noqotid inaad halkaas ugu dhiman karto sida walaashaa oo hooyadaa sidoo kale ay kaa lumin doonto. Cabdisamad waxaa lagu badbaadiyay badda waxaana dib loogu celiyay Liibiya. Wuxuu go’aansaday inuu ku laabto Soomaaliya halkii uu naftiisa mar kale khatar gelin lahaa. La soco sheekadiisa!
Sheekada Cabdiraxman Xashi: Miyaan jooga, mise miyaan tagaa
“Qaar ka mid ah asxaabteyda ayaa la safray tahriibiyeyaal. Waxay noo sheegeen inay ku noolaadaan nolol wanaagsan halkaas. Taasi waa waxa igu kalifay inaan iloobo noloshaydii macaanayd, iloobo hooyaday gacaliyahay, sidoo kale iloobo qoyskayga aan jeclahay, taasina waa sababta aan uga tagay. ”
Cabdiraxmaan wuxuu mooday inuu si sahlan Yurub ugu mari doono Liibiya laakiin riyadiisii ​​si xun ayaa loo jabiyey.
Sheekada Sacad: Safar uu qoomamayn doono
Sadeed wuxuu dareemay inay xun tahay inuu ka tago qoyskiisa laakiin asxaabtiisa ku sugan Europe ayaa ku dhiirigaliyay inuu baxo. Safarka uu ku marayay dalalka Suudaan iyo Liibiya ayaa noqday mid riyo ah, isaga oo xaqiijinaya dhibaatadiisii ​​ugu xumayd. La soco sheekadiisa!
"Safarku wuxuu saameyn weyn ku yeeshay nolosheyda. Ma ahan wax aad si fudud u ilaawi karto. Waxaan la kulmay waxyaabo badan oo aanan filanayn, garaacis, dhac iyo xanuun. Waxaan arkay silica badan oo aanan xitaa horay u maleynaynin. Waxyaabaha aan maqlay oo aan ku fikiray waa been".
Ugu danbayn »